Ndị na-ekesa mmiri → facilitieslọ ọrụ ọhaneze • iceslọ ọrụ • •gbọ elu ụgbọ mmiri • Bank
Need chọrọ onye na-enye mmiri na ụlọ ọrụ ọha, office, ọdụ ụgbọ elu, akụ? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
Otu n’ime ihe dị mkpa mmadụ ji arụ ọrụ bụ mmiri. Rationme ahụ nke ọma na afọ ojuju nwere mmetụta dị mma na ahụike yana usoro ndụ niile na ahụ anyị.
Ọchịchọ mmiri na-abawanye n'oge ọkọchị, mgbe akpịrị kpọrọ anyị nkụ n'oge ihu igwe na-ekpo ọkụ. Yabụ, ezigbo usoro dị mma bụ isi iyi, isi iyi na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ndị na-aba ụba n'ọtụtụ ebe ọha.
Ngwaọrụ ndị a na-enye mmiri dị ọcha ma dị mma. N'ihi nsị mmiri a na-etinye n'ime ha, onye ọ bụla nwere ike ị waterụ mmiri dị ụtọ ma dị ụtọ ma ọ bụ jupụta karama ma ọ bụ karama mmiri. A na-eme ndị na-enye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'oge a n'ụzọ ọ bụghị naanị ndị okenye na ụmụaka, kamakwa ndị agadi nwere ike iji ha na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Isi iyi nke mmiri na-arinụ mmiri na-enye mmiri nke na-emezu ụkpụrụ niile achọrọ, ya mere ọ dị mma ị drinkụ mmiri na, na mgbakwunye, ụtọ nke ukwuu.
Enwere ike ịnye ndị na-a waterụ mmiri ọ inụ drinkingụ a n'ihu ọha, ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ogige na ebe egwuregwu, yana ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ.
Ngwaọrụ ndị a na-eme ka ndị mmadụ nọrọ ebe ndị a nwee ahụ iru ala ma nwee ike lekọta ahụike ha site na ị drinkingụ mmiri dị ọcha na ezigbo mmiri.
Ya mere, a ga - achọta isi iyi nwere mmiri ọ drinkingụ whereverụ n’ebe ọ bụla anyị na - etinye oge buru ibu, anyị anaghị enwekarị ohere ịzụta mmiri dị ọcha ma ọ bụ ihe ọ anotherụ anotherụ ọzọ. Ndị na-a waterụ mmiri abụghị naanị isi iyi nke mmiri dị ụtọ ma dị ụtọ, kamakwa, n'ihi usoro a na-ahụ maka ụwa na nke ọhụụ, bụ ihe ọzọ na-emetụta ihe ndozi nke oghere ọhaneze.
Stationsụ mmiri mmiri nwere ike ịnye mmiri nke ọma, ma belata nsị mmiri na nkesa nkesa, ma nye mgbagha gburugburu ebe obibi site na ibelata oriri nke karama plastic na ibelata mmepụta ihe.
Ndị na-a waterụ mmiri na isi iyi na-enyere aka n'ịkwalite ibi ndụ dị mma site na ịkpa agwa nke ị freshụ mmiri dị mma kama ịveraụ mmanya dị ụtọ.
Inye mmiri doro anya kristal a na-akparaghị ókè, dị ọhaneze ọ bụla na gburugburu elekere, na-abawanye akparamagwa ahụike na ịmara ọhụụ na gburugburu ebe obibi, na-ebelata oke ego metụtara mkpofu mkpofu ahịhịa n'obodo.
Ndị na-a waterụ mmiri, isi iyi na isi iyi na-azọpụtakwa oge, ohere na ego, nke emeburu iji chekwaa mmiri nwere mmiri.
A na - eji ihe ndị eji eme mmiri na - a ,ụ mmiri na - eji mmiri ọgbara ọhụrụ eme ihe, na - ejigide ike ogologo oge yana ụgwọ arụmọrụ dị ala.
Designdị dabara adaba nke ngwaọrụ ahụ ana achi achi na mmiri a wetara nwere ezigbo ọ ,ụ ,ụ, ọhu mma ma tasteụ ụtọ.
mmiri anaghị eji cylinder agbapụta mmirihichaa mmiri mmirinyefe mmiri n’ọdụ ụgbọ eluonye na-ewepụta mmiri maka ụlọ akụonye na-enye mmiri maka ọfịsonye na-ekesa mmiri na ọfịsmmiri ọ drinkingụ dispụ ndị na-a theụ mmiri maka ọfịsndị na-enye mmiri mmirimmiri carbonatedmmiri ọkụsi na mgbatammiri maka ọfịsmmiri n’ọdụ ụgbọ elummiri n’ọfịsmmiri nke ọmammiri oyimmiri ụsọ mmiri maka ụlọ ọrụ ọha